Basa & Nzvimbo Yebasa Utah Pride Center
musha » Basa & Kubasa
Directory Category: Basa & Kubasa
Basa & Kubasa
LGBTQ + Kusarura munzvimbo yebasa: Mitemo, Zvipingamupinyi, uye Zviwanikwa
Kuziva LGBTQ + Kusarura muKushanda:
Nhanho yekutanga yekumisa rusarura munzvimbo yako yebasa kugona kuziva kuti rusarura rwunoitika kupi uye sei, zvese kubva mukati nekunze maonero. LGBTQ + vanhu vanogona kusangana nerusarura kubva kune chero chikamu chezviitiko zvebasa ravo, asi kazhinji zvinogona kuonekwa:
Panguva yekuhaya nekutora;
Munzvimbo dzakagovaniswa kana dzeruzhinji mahofisi;
Kubva kune vamwe vatinoshanda navo kana maneja;
Mukukurukurirana kwemubhadharo kana kubhadhara zvipenga.
Kusarura kana kushungurudza munzvimbo dzese idzi kunogona kuita kuti basa ripedze, kutora matanho ekuranga, uye kunyange kumhan'arira kushungurudzwa zvisina kuoma kana kusagadzikana.
Ichi chishandiso kubva kuFiscalTiger.com chinopa kuputsika kwezvinoreva kushungurudzwa munzvimbo idzi, ndeipi nzira yepamutemo inogona kuwanikwa, uye mashandisiro ekushandisa zviwanikwa nevabatsiri kugadzirisa nekuchengetedza ruzivo rwako rwekushanda.
Tarira kubva kune vanyori vezvivakwa paFiscalTiger.com:
Ichi chishandiso chiri kuvandudzwa zvichibva pamutongo wedare reSupreme Court kuti kutyora mutemo wezvematongerwo enyika kusarura LGBTQ + Nharaunda munzvimbo yebasa. Zviripachena isu tichafanirwa kugadzirisa zvimwe zvakakura kuchikamu, asi gwara richiri rizere neruzivo kubatsira vanhu kuti vazive rusarura uye vanzwisise zviwanikwa zvemutemo zvavanowana.